Dadka Ugu Taajirsan Caalamka 2021 | Maan Kaab
Home Dhaqaalaha Dadka Ugu Taajirsan Caalamka 2021
Dadka Ugu Taajirsan Caalamka 2021
Sanadkii Tagay wuxuu ahaa mid adag gaar ahaan dhanka dhaqaalaha iyo wax soo saarka madaama uu dunida kala xanibay Covid-19, ilaa haatan waxa la daala dhacayo oo uu saameyey dadka danyarta ah iyo dadka haysto ganacsiyada yar yar, waxana jiro dad isku dayayo sidii ay uga soo kaban la haayeen dhaqaale burburka gaaray.
Hoos udhac dhaqaale ayuu sababay caabuqa Covid-19
Si kasto ha ahaate dadku waayuhu isugu mid mahan waxa jiro dad taajiriin oo aad u macaashay tan iyo intii Covid-19 bilowday.
Hadaba Mawduuceena maanta waxan kaga hadlayna dadka ugu taajirsan 2021.
Majalada caanka ah ee dhanka dhaqaalaha ka faaloota ee lagu magacabo “forbes” waxay soo saartay dadka ugu hodansan ama xog ku saabsan billionaireda caalamka, sida ay majaladan sheegtay tirada billionaireda caalamka waxay gaarayan 2755 billionaire waana sanad record cusub ah madaama ay soo kordheen 660 billionaire, waxayna tirada billionaireda caalamka sanadkii tagay ee 2020 gaarayeen 2095 billionaire.
Hadaba Waxa jiro bilyoonero marar badan ka soo muuqday liiskan laakin kuwa ku cusub liiskan waxay gaarayan 493 bilyooneer, waxayna bilyoonerada cusub 205 ka mida ka soo jeedan dalka china marka laga reebo hongkong iyo mekaw oo maamul gaar ah leh, waxayna ka dhigan tahay in 17 saacba hal qof noqonayey bilyooner waana marka laga soo tiriyo liiskan midkii ka horeeyey ee soo baxay 18 March 2020ka.
Kanye West Raper American Ah
Waxa bilyoonerada cusub kamida kanye west oo markii ugu horeysay si rasmi ah uga soo muuqday liiskan, waa raper American ah, nashqadeeye fashion ah sido kalena waa siyaasi waxa hantidiisa lagu sheega $1.8 billion, waxayna hantidiisa inta badan ka timid kabaha “Yeezy” oo isagu nashqadeeyey.
Kim Kardashian Xaaski Hore Ee Kanye West
Sidoo kale liiskan waxa ku cusub xaaskii hore ee kanye west oo ah haweenayda lagu magacaabo Kim Kardashian, waa haweenay ka soo muuqato dhanka warbaahinta, modelka iyo ganacsiga, waxaan hantideeda lagu sheegay ilaa hal billion oo dollar, waxayna lacagta ugu badan ka soo gashay dhanka make upka KKW.
Liiska bilyoonerada ee ay soo saaratay majalada forbes hantidooda marka la isku daro waxay gaaraysa $13.1 trillion waxaana ku korortay $5 trillion madaama hantida bilyoonerada caalamka ay ahayd sanadkii tagay ee 2020 ilaa $8 trillion.
Jeff Bezos Mulkiilaha Amazon
Jef Bezos ayaa noqday afar sanoo xiriir ah maal qabeenka dunida ugu taajirsan, waxana hantidiisa lagu qiyaasa 177 billion oo dollar, waana asaasaha shirkada Amazon. Markii ugu horeysay ee uu noqday bilyooner waxay ahayd 1999kii isago ah 35 jir. Yaraantiisi wuxuu inta badan ku soo qatay beer uu awoowgiis alaha halkas ayuuna ariga ku raaci jiray.
Elon Musk Mulkiilaha Tesla
Ninka labaad ee dunida ugu taajirsan waxa noqday Elon Musk oo hantidiisa lagu qiyaaso 151 billion, waana mulkiilaha shirkada farsamayso gawaarida korontada ku shaqeeyo ee Tesla iyo shirkada Space X oo farsamayso dayax gacmeedyada ayaa bishii January ee sanadkan noqday shaqsiga ugu taajirsan dunida ka dib markii shirkadiisa Tesla ay kordhisay qiimaha saamiyada ay iibinayso, waxayna hantida Elon Musk ahayd xiligas 185 billion oo dollar, balse bilowgii bishii sadexad ee sanadkan wuxuu sameeyey hoos udhac weyn isagoo lumiyay ilaa 26 billion oo dollar, waxaana ka faaideystay Jef Bezos oo haatan ah ninka ugu taajirsan dunida
Akhri: 10 Faaido Oo Basashu Timaha U Leedahay10 Caado Oo Dadka Faqiirka ah Sameeyan
Jef Bezos sababaha keenay inuu lumiyo booska 1aad inuu xaaskiisi hore ee MacKenzie Scott siiyey ku dhawaad 30 billion oo dollar, haatan Mackenzie waa shaqsiga 22aad ee ugu taajirsan waxana hantideda lagu qiyaasay 53 billion oo dollar, waxana xusid mudan inay sanadkii tagay sadaqo ahaan u bixisay 6 billion oo dollar.
10ka Qof Ee Ugu Taajirsan caalamka 2021
10ka qof ee ugu hodansan dunida 8 kamida waxay ka soo jeedan maraykanka labada aan maraykanka ka soo jeedina waa Bernard Arnault oo u dhashay wadanka France kaalinta 3aadna galay waxana hantidiisa lagu qiyaasay 150 billion oo dollar, shaqsiga kale een maraykanka ka soo jeedin waa Mukesh Ambani kaalinta 10aadna galay waxaana hantidiisa lagu sheega 80 billion oo dollar. Sida ka muuqato kaalmaha ugu horeeyo dalka maraykanka waa dalka ay ka soo jeedan bilyoonerada ugu badan caalamka waxaana American ah 724 bilyooner, dalka ku soo xigo china oo ay ka soo jeedan ilaa 626 bilyooner.
Hadaan fiirino 10ka dal ee ugu taajiriinta badan caalamka waxa kaalinta 1aad soo galayo maraykanka oo leh 724 bilyooner, waxa kaalinta Labaad soo galay China oo leh 626 bilyooner, India, Germany, Russia iyo Hongkong oo ahmaamul hoos tago China, ingiriiska iyo Canada. Marka laga hadlayo magaalooyinka ugu bilyoonerada badan caalamka waad iska iloobaysa magaalada Newyork waxana kaalinta kowaad ka gashay magaalada Beijing ee china waxayna leedahay 100 bilyooner, magaalada Newyork ayaa soo gashay kaalinta labaada iyado leh 99 bilyooneer hal bilyooner oo kaliya ayay ku weyday kaalinta 1aad.
Aliko Dangote Ninka Ugu Taajirsan Qaarada Africa
Tirada guud ee bilyoonerada Africa waa 18 bilyooner, waxana wali ah ninka ugu taajirsan africa haysto ganacsadaha muslimka ah ee lagu magacaabo Aliko Dangote wuxuuna haysta 12 billion oo dollar.
Françoise Haweenayda Ugu Taajirsan Caalamka
Dhanka dumarka waxa kaalinta 1aad fadhido Françoise oo ka soo jeeda franciiska waxana hantideeda lagu qiyaasay 73.6 billion oo dollar, waxa kaalinga labaad fadhido Alice Walton oo maraykanka ka soo jeedo waxana hantideda lagu qiyaasay 68 billion oo dollar, kaalinta sadexaas waxa fadhida Mackenzie Scott oo ah xaaskii hore ee Jef Bezos.
Kevin David Lehmann Bilyoonerka Ugu Da’da Yar Caalamka
Majalada forbes waxay bilyoonerka caalamka ugu da’da yar u aqoonsan tahay Kevin David Lehmann oo u dhashay wadanka Jarmalka waa 18 jir haysta 3.3 billion oo dollar waxayna ka soo gashaa dhanka daawada.
Dadka ugu taajirsan caalamka
Dadka ugu taajirsan Somaliya
Previous article10 Faaido Oo Basashu Timaha U Leedahay
Next article5 qof allah uma dambi dhaafo